Gwara rakazara rekunzwisisa mashandisiro aungaita Binance - Cazoo
musha » musha » Gwara rakazara rekunzwisisa mashandisiro eBinance
Tag: Binance, Crypto kutengesa, Exchange, Launchpad, launchpool, Limit order, Musika kurongeka
Nguva yekuverenga: 16 minuti
Uri kuedza kunyudza zvigunwe zvako mu cryptography kekutanga kana iwe wawana iyoyo inoshamisa ari Altcom uye iwe unoda kupfuura neCoinbase kuti uwane? Kana izvi zvamboitika kwauri zvisati zvaitika, unogona kunge uchitsvaga Shanduko iyo inokupa mukana wekuwana mazana e ari Altcom nekutengesa vaviri vaviri. Shanduko inokupa iwe dzimwe sarudzo dzekuisa madhora, mapaundi, maeuro ... pamwe, uye pamwe pamwe, pamwe iwe unofarirawo kuve nemukana wekutengesa neramangwana kuti uwane mubereko pane yako cryptocurrency. Pamwe iwe unotoda kutora imwe crypto Visa kadhi. Zvichida pamwe iwe unoda kutora chikamu mune imwe yeaya asinganzwisisike IEOs (Chekutanga Shanduro Kupa) icho mumwe munhu akakuudza nezvacho .. kuti iwe waverenga pane imwe nzvimbo .. nhau dzakanaka dzese! Iko kune iyi isinganzwisisike Exchange iyo inopa zvese izvi uye zvakawanda. Chokwadi, ndiyo nhamba yekutanga cryptocurrency kuchinjisa munyika: Binance.
Ini ndinonyora yakajeka gwara revatangi vekushandisa Binance. Nhanho nhanho, kuti ungatenga sei Bitcoin neyakajairwa Fiat mari, isu tichaona maitiro ekutengesa pane iyo Shanduko uye nekukupa iwe kutarisisa kwakazara kweimwe huru maficha eBinance. Tichatarisawo kuti ungawana sei 40% mari yekutengesa mutengo kuti ugone kuchengeta yakawanda yeiyo crypto mibairo muhomwe yako sezvinobvira.
Pano pa cazoo chinangwa changu ndechekuisa mumusoro, nekuchinyora, iwo ruzivo rwandinotora zuva rega rega pamhepo, nekuti iyi yagara iri nzira yangu yekudzidza. Kana ndikainyora, ndinoirangarira. Panzvimbo pekungozviita neshoko, ndinozviita pano, kuti ndigone kubatsira mumwe munhu nezvangu zvinyorwa. Ini ndichataura newe uchitaura neni ndega, sekunge yanga iri dhayari.
Sezvo munhu wese achiti handisi vanopa mazano ezvemari pamwe zvakafanira kuvhara chigaro chako, uye ndobva ndazvitaura zvakare: Ini handisi chipangamazano wezvemari, Ini handisi kukuudza maitiro ekudyara mari yako uye ini handife ndakazvibvumira ini.
Wakagadzirira kudzidza zvese nezve Binance? NGUVA.
Ko Binance inovhara yese crypto inondinakidza here?
Kuisa Crypto paBinance
Maitiro ekuchengetedza pamakomisheni
Iko kushambadza pane iyo Binance Peji Peji
Ungatengesa sei paBinance?
Mamwe masevhisi aripo?
Ngatitorei pfupiso yeBinance sekambani? Mushure mezvose, ingangove zano rakanaka kuti uzive wauri kusangana naye usati waisa mari papuratifomu yavo.
Chekutanga minus poindi: hapana anonyatso kuziva kuti Binance inotungamirwa kupi. Vazhinji vanoti Malta, zvakadaro rinenge gore rakapfuura mutongi weMalta akapindura mumunhu kutaura kuti Binance haisi pasi pesimba reMalta. Zvisinei, idambudziko here? Kufarira kuziva kuti Bitcoin yakavakirwa kupi? Aya makambani e cryptocurrency. Zvichida zvirinani kusavatonga sezvaungaita nekambani yechinyakare. Mushure mezvose, Binance ndeyepasirese uye akashanda mahofisi kutenderera pasirese mune dzakapoterera makumi mashanu nyika.
Vakomana veBinance vakahwanda futi? Ndingati kwete: pakati pavo pane mukurumbira muvambi uye wizard yezvemari Changpeng Zhao, anozivikanwa zviri nani saCZ, anotora chikamu mumabvunzurudzo mazhinji, anonyora kazhinji pa Twitter uye kunyangwe zuva rimwe rinowanikwa pabutiro remagazini yeForbes. Sekureva kwemagazini ino, CZ inoita kunge munhu wechishanu akapfuma mu cryptocurrency aine mambure akakosha anofungidzirwa pamadhora 1,9 bhiriyoni.
Changpeng Zhao pabutiro reForbes
Yakatangwa muna2017, mushure mekubudirira kweICO iyo yakasimudza madhora gumi nemashanu emadhora umo varimi vakawana BNB tokeni mukutsinhana, pamutengo wekutanga wemasendi gumi. Nhasi BNB irikungotenderera madhora mazana maviri nemakumi mashanu .. iyo haisi kudzoka kwakaipa mukudyara kune avo vakavimba CZ kubva pakutanga. Mu15, Binance akagadzira madhora mazana mashanu nemakumi manomwe emamiriyoni mune purofiti, uye pakupera kwa10 Shanduko chete yaive nemari inosvika bhiriyoni rimwe remadhora. Zvakare mu250 Binance ane akawana mutengesi wemakadhi e-cryptographic Rova zvakasimba, chirongwa chinosvika madhora mazana maviri emadhora. Izvo zvakare ichangobva kuwana coinmarketcap.com ye $ 200 mamirioni. Dzimwe nzira dzekudyara sanganisira iyo FTX Exchange, iyo chiratidzo ndeimwe yepamusoro makumi mana emari yemadhora uye ine kukosha kwakatenderedza 40 bhiriyoni capitalization musika.
Iyi yandakangonyora haisi rondedzero yakakwana yezvose Binance yavakaisa mari mukati, asi ndinofunga unonzwisisa kuti Binance Exchange haisi chirongwa chinomhanya kumwe kunhu pasi pevhu. Kwete. dai vavariro dzavo dzaive nenjodzi… vangadai vakarasikirwa nezvakawanda.
Binance zvakare ane yakaratidza track rekodhi yekuita chaicho chinhu - iwe unogona kunge uchitoziva kuti vakabiwa mu2019, uko ingangoita 2% yeBitcoin inobata pane iyo Shanduro yakarasika. Nekudaro, Binance akadzorera zvizere avo vese vakakanganiswa neiyo yekubira kudhirowa mari kubva kuhomwe yeSAFU (Yakachengeteka Asset Fund yeVashandisi) inova iyo kapu yekristpto mari yakaiswa padivi kuvhara zvinhu zvakaita sehacks.
Ini ndingati takawana pfupiso yakanaka. Ngatiende kumberi, uye tione maitiro ekuziva kana iyo altcoin yaunoshuvira yakanyatso nyorwa pane iyo Shanduko. Mushure mezvose, ndeipi pfungwa yekumisikidza account kana izvo zvauri kutsvaga zvisipo. Iye zvino ini ndinokuudza iwe hunyengeri kuti unzwisise mune iyo Shanduro chero cryptocurrency inotengeswa.
Kuti uite izvi unogona kuenda ku coinmarketcap.com, tinya pakutsvaga uye nyora mu crypto iwe yaunofarira. Mune ino kesi ini ndaishandisa Avalanche. Kamwe iwe tinya paAvalanche iwe uchaona iyo peji rehuwandu ine akateedzana emametric uye chati yemutengo. Kana iwe ukatarisa pamusoro pemutengo chati uchaona boka rezvakasiyana sarudzo uye imwe yacho ichave bhatani reMusika. Dzvanya pamurume mudiki iyeye uye iwe nekukurumidza uchaona ese akasiyana ekuchinjana ayo Avalanche akanyorwa pamwe neakasiyana ekuchinjana mapara anowanikwa.
Ngatione: AVAX inogona kutengwa paBinance neUSDT, BTC, EUR, BUSD uye BNB zviratidzo. Zvakare ramba uchifunga kuti Binance kazhinji ine yepamusoro yekutengesa vhoriyamu kune angangoita ese akatsigirwa macryptocurrency, saka vanhu vazhinji vanotengesa mari iri mubvunzo vanozviita zvakadaro paBinance. Chero nzira, unogona kudzokorora nzira iyoyo kune chero cryptocurrency kuti uone kwekutenga.
Kubatana neBinance kuri nyore chaizvo, hapana chikonzero pakunyora nhanho nhanho zvekuita, ndinovimba kuti iwe uchashandisa password iro rakanyanya kunetseka kufungidzira, uye ita shuwa kuti wagadzira mbiri-chinhu chechokwadi uchishandisa Google Authenticator. Kuchengetedza hakuna kumbonyanya kuwanda!
Isu taisa mari yefiat, kureva maeuro kana madhora, paBinance.
Pamusoro pane iyo Buy Crypto bhatani, tenga cryptocurrency. Mushure mekudzvanya iwe uchaona rondedzero yeese akasiyana mareti mari. Chii chakanyanya kutonhorera nezve Binance ndechekuti dzimwe dzenzira dzekuisa idzi hadzina komisheni-yemahara, saka uri kunyatso kuwana yakanyanya mari yako. KuEurope yose kuendeswa kwebhangi, saka iyo SEPA dhipoziti, iri zero makomisheni , nepo kana iwe uchida kushandisa yako kiredhiti kadhi kuita iyo dhipoziti paBinance zvese Visa uye Mastercard, iwe uchapihwa 1,8% pa euro. Ini handidi kubhadhara makomisheni. Ingo chenjera chinhu chimwe kana uchishandisa bank transfer: unofanirwa kushandisa zvakafanana yekubhadhara kodhi kodhi, iyo yekubhadhara kodhi kodhi, iyo iwe yaunoona muBinance. Iyi nzira Binance anoziva kuti ndiyo yako dhipoziti uye iyo ichagoverwa yako account. Kana dhipoziti yako yagadziriswa uye uine maeuro muakaunti yako yeBinance, unogona kudzokera kuTenga Crypto tebhu uye sarudza Cash Balance kubva kumenyu inodonhedza.
Pa peji rinotevera iwe unogona kuisa kuti sei uye ndeipi cryptocurrency yaunoda kutenga. Binance zvakare inokuratidza iwe kuti yakawanda sei mari yemadhora yaunogamuchira .. chaizvo ndizvo zvese zviripo kwazviri.
Ko kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchida kujoina iyo altcoin buffet pane inochinjana?
Kuti uise crypto muaccount yako, pinda muaccount yako wobva wadzvanya bhatani rechikwama kurudyi kwechiso. Izvi zvichawedzera menyu yekudonhedza uye isu tinofarira chinhu Fiat uye Spot. Pinda ipapo. Iwe uchaendeswa kune ino skrini:
Wobva wadzvanya pane bhatani dhipozita, uye peji rekutanga rinozoonekwa richava peji rekuisa reBitcoin nekero yaro yeBTC. Kana iwe uchida kuisa BTC ndiyo kero iwe yaunogona kushandisa kutumira Bitcoin kuBinance. Nekudaro kana iwe uine ari Altcom iwe unoda kuisa panzvimbo iwe unogona kungobaya pane iro bhatani reBitcoin kuti uwedzere menyu ekudonhedza uye tsvaga iyo crypto yaunofarira. Pano semuenzaniso ini ndasarudza Cardano.
Isu takati kune makomisheni ekutengesa: ikozvino ini ndichatsanangura maitiro ekuvabhadhara zvishoma zvishoma. Ini zvakare ndine mamwe mazano pane kwaungawana Kukwidziridzwa kweBinance, uye zvimwe hazvifaniri kushaikwa.
Makomisheni anoita kunge ehunhu, asi anogara achifanira kuwedzerwa .. uye kana vazove vazhinji mukufamba kwenguva vanozoita kuti vanzwike, saka nyatsoteerera.
Chekutanga pane zvese: kune maviri marudzi e cryptocurrency mari yekutengesa, yekutanga ndiyo Take Fee iyo inoshanda kana iwe ukaisa odha pamutengo wazvino wemusika. Yechipiri ndiyo Yekumaka Fee, iyo iwe yaunobhadhara kana iwe uchipa hunyanzvi nekupinza zvinhu se "muganho wekuraira". Ndine chokwadi chekuti maTaker Fees achabhadharwa mashandiro aunoda kuita, saka ngatitarisei pane izvi.
Yese mari yeTaker neMaker inotangira pa0,1000% Commission. Kune nzira dzinoverengeka dzekudzora iyo mari mberi. Yokutanga ndeyekutengesa anopfuura makumi mashanu eBitcoins mumazuva makumi matatu… iro risingatenderwe rekutengesa vhoriyamu. Neimwe nzira iwe unogona kuchengeta zvinopfuura makumi mashanu eBNB muaccount yako kune yakaderedzwa zvishoma Muiti Mari ye50%. 30 BNB, izvozvi, inenge € 50, saka ichiri mari yemuchinda.
Kana iwe uchida dhisikaundi paTaker Fees, iwe uchafanirwa kuchinjanisa 4500 BTC mumazuva makumi matatu kana uine 30 BNB muaccount yako. Hongu, izvo zvinopfuura mazana maviri nemakumi maviri emari mu crypto BNB Vangani vane mari yese padivi?
Saka zvandinokurudzira ndezvekuti gara uchichengeta imwe BNB muaccount yako uye shandisa izvo kubhadhara mari dzekutengesa. Ita izvozvo, uye iwe unobva watora wega 25% kubva pane iwo mafaiti uye ubhadhare chete 0,0750%. uye hongu, unogona kuponesa zvakatowanda! Iwe unofanirwa kushandisa ichi chinongedzo changu nekutumira, uye iwe unogona kuwana imwe 20% kubva kune iyo mari yekutengesa.
Saka, kana iwe uri kuvhura iyo nyowani Binance account ikozvino unogona kuita zviviri zvakapusa zvinhu: tenga imwe BNB kubhadhara mari yekutengesa, uye kusaina uchishandisa yangu link. Kana ukadaro, unogona kutanga kutengesa zvachose kudzora makomisheni ne40%, kubva pa0,1000% kusvika pa0,0600% chete.
Pamwe hapana munhu anotaura nezve inonakidza kushambadza paBinance inowanikwa papeji rekutanga.
Mazhinji ezvekushambadzira anoitirwa kune crypto-junkies, avo vanopinda mukuzvidzora vasina crypto. Asi zvichiri kukosha kuenda kuburikidza navo uye kuona kana paine avo vane kukosha kwaunofarira.
Semuenzaniso, kana iwe waida kutengesa REEF crypto, paive nemakwikwi e $ 50.000 REEF. Nepo iyi mibairo ichiwanzo enda kunanga kwevatengesi vane simba, pane chinhu chejotari kune akawanda ekusimudzira: mumakwikwi aya ekutengeserana neREEF crypto, makumi maviri evanhu vane rombo rakanaka avo vaitengesa neREEF vakasarudzwa zvisina mutsindo kuti vatore mazana mashanu sechipo. ye REEF. Vakande kure.
Zvakanaka, ikozvino unoziva nezve makomisheni uye kukwidziridzwa. Ngatitangei kutaura nezve chaiyo yekutengesa paBinance.
Saka pane nzira dzinoverengeka dzekutengesa paBinance. Ndeipi nzira yakapusa? Semazuva ese, ita shuwa kuti wapinda muakaunti yako yeBinance, wobva wadzvanya Trade kubva kumusoro bar yemenu, uye sarudza Shandura.
Iwe uchauya kuchiratidziro kwaunogona kusarudza iyo cryptocurrencies yaunoda kushandura uye kusarudza iyo huwandu hwaunoda kutengesa.
Ngatizvifungidzire isu tinoda kutengesa 1 ETH muBitcoin.
Ingo pinda nekukanda pane Ongororo yekutendeuka. Iwe uchaona iyo mutengo mutengo uye hanya, une mashoma mashoma kubvuma mutengo iwoyo. Kana wapedza, wapedza basa. Zviri nyore kwazvo.
Chinokanganisa nzira iyi ndechekuti kunongova nenhamba shoma yemapara ekutengesa uye inongotsigira marongero emusika, zvinoreva kuti unofanirwa kuvimba nemutengo wemusika panguva iyoyo chaiyo.
Kana iwe uchida zvimwe kuchinjika, iwe unogona kuzviwana mune yakasarudzika yekutengesa pani: mune yekufambisa bhawa kumusoro, Kutengesa uyezve kweClassic.
Uchazoona skrini yekutengesa seiyi uye pamwe uri kufunga "Damn. Ndakaziva kuti zvaizonetsa". Tora danho shure! Uye usavhunduke. Ini ndinokuvimbisa kuti haina kuomarara sezvazvinogona kuita sekutanga kuona.
Iko mukana wekushandisa iyi mhando yekutengesa interface ndeyekuti inogona kukubvumidza iwe kuti uise epamberi mhando yekuodha, izvo zvinogona kukusevha mari yakawanda uye yakawanda nguva.
Kuti tinzwisise zviri kuitika neiyi yekutengesa interface ngatigadzike muzvikamu.
Order Bhuku, rejista yemirairo
Kuruboshwe iOrodha Bhuku, bhuku rekuodha, Idzo dzose nhamba dzvuku dziri kumusoro dzinotengesa maodha eimwe cryptocurrency uye ese egirini ndeekutenga maodha. Yese mirairo iyi inoitwa nemitengo yakasiyana. Chikamu chekuruboshwe mubhuku rekuraira ndiwo mutengo wakaiswa nevanhu kutenga kana kutengesa maodha. Chikamu chepakati ndicho chitsama chekristpto chinowanikwa kune mamwe marongero emutengo, uye pakupedzisira tichava nekoramu chaiyo mubhuku reodha rinoratidza kukosha kwedhora kunowanikwa mumitengo yakasiyana yekutengesa. Pakati pechidzitiro unogona kuona chati yemutengo.
Sefa kumusoro nehuremu hwenguva
Unogona kusefa maringe nenguva dzakasiyana uye unogona kudzvanya pamuseve mudiki kuti uone maturusi echati, kana uchifarira kuongorora kwehunyanzvi. Tinogona kutaura zvakawanda nezvazvo .
Vhura maturusi echati pazasi
Nechekumusoro kurudyi kwepaneru yekutengesa iwe une ese akasiyana ekutengesa maviri maviri anowanikwa paBinance. Nebasa rekutsvaga iwe unowana iyo cryptocurrency iwe yaunoda kutengesa (kushambadzira, Vatauri veChirungu vanoti). Iye zvino ndiri kutsvaga iyo ticker ADA, yeCardano, uye sezvaungaona dzakasiyana dzekutengesa vaviri vaviri dzakabuda. Ndinoziva, une mibvunzo miviri.
Tsvaga iyo ticker iwe yaunoda kutanga kutengesa
Kutanga, zvinorevei izvo izvo 10x uye 5x kana 3x zviratidzo zvinoreva padhuze nevamwe veADA anotengesa maviri? Ivo vanongoreva kuti iwe unogona kutengesa nekutengesa gumi kana mashanu kana matatu kuburikidza ne Margin business: ndipo paunokwereta mari kuti utengese nemari, kuti uwane mari yaunowana (uye kurasikirwa).
Kunyanya, iwe uri kungotanga? Ramba kushambadzira zvakabhadharwa zvachose, rega vatengesi vane ruzivo varishandise kana kudzidza kuti uve mutengesi ane ruzivo uye iwe unogona kunyatsonzwisisa njodzi.
Chinhu chechipiri chaungangodaro uchinetseka ndechekuti nei ndatsvaga ADA pane kutsvaga Cardano. Chokwadi, kana iwe Czech Cardano, hapana chinobuda. Icho chikonzero ndechekuti ekutengesa maviri maviri anoshandisa akapfupisa vhezheni yemakristpto mazita, anonzi matiki. Inowanzo sanganisa mavara matatu kana mana. Uye iwe unowana sei iyo ticker yeiyo crypto yaunoda kutenga? Enda kune coinmarketcap uye tsvaga iyo crypto iwe yaunofarira. Iyo teki ichaonekwa kurudyi kwezita re cryptocurrency.
Iwe unogona saka kuwana iyo ticker yechero cryptocurrency. Ngatidzokerei kune iro rekutengeserana pani.
Kutengesa kweMusika, kuchinjana pamusika
Mukona rezasi rerudyi une maMusika Anotengeswa, kureva iwo anotengesa pamusika. Ndiwo chete mabasa achangoburwa ayo akaitwa anoratidzwa.
Uye pakupedzisira, iwe une chikamu chemapaneti ekutengesa uko mashiripiti ese anoitika uye kwaunopinda iwo ese akakosha mirairo.
Nokutadza iyi menyu yekumisikidza ichaiswa kuRimit Orders. Nzira yakanakisa yekutsanangura zvavari ndeye kushandisa muenzaniso: ngatitii mumaonero ako mutengo weBitcoin ikozvino wakanyanya kukwirisa, uye iwe unofara kutenga kana yadzokera ku40.000. Unogona kuisa odha iyi paBinance - uchafanirwa kutaipa mumutengo iwoyo wemakumi mana ezviuru uye sarudza huwandu hweBitcoin yaunoda kutenga. Nekudzvanya bhatani reGreen Buy iro odha ichawedzerwa kune rejista reodha. Kana iwe uri kurara mangwana manheru uye mutengo weBTC unodonha kusvika ku40.000 paBinance, saka uyu muganho odha unozongoerekana watanga uye iwe uchawana yako BTC pamutengo wakaderera uyu.
Iwe wakanzwisisa here kuti muganho maodha anoshandiswa mukutengesa crypto? Zvichida zvingave zvakakodzera kushandisa aya maRitim Orders pachinzvimbo cheMarket Orders.
Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti muganho maodha anoshandisa Muiti Mari sekhomisheni, uye kwete maTaker Fees, ayo anogona dzimwe nguva anodhura paBinance. Limit maodha anoshanda zvakangofanana padivi rekutengesa: Ini ndaigona kuisa muganho odha imwe bitcoin kana mutengo wacho wasvika 100k - iro rairo rinogara ipapo uye risingaite chinhu kusvikira mutengo wasvika.
Zviripachena, aya maodha anogara achikanzurwa. Iwe unogona zvakare kuseta kuti iyo odhiyo inofanira kungoshanda chete kune imwe nguva yenguva asi iyi iri musoro wenyaya yechimwe chinyorwa.
Masika Orders ndiwo akapusa marudzi eodha: uri kungoisa mari yaunoda kutenga uye kutora mutengo wemusika kana uchiisa odha.
Chinhu chega chatisingataure nezvacho ndeye Stop Limit Orders, handikwanise kutsanangura izvo zvakanaka.
Asi kana iwe wanga uchinge wakangwarira, iwe unofanirwa ikozvino kuziva izvo zvekutanga zvekutenga nekutengesa cryptocurrency uchishandisa Market Orders uye Limit Orders. Pane chimwe chinhu chekudzivisa: Ramangwana.
Zvinotorwa - Mangwana
Izvo zvine njodzi zvakanyanya kupfuura Margin Trading. Nguva yemberi inogona kuva chishandiso chinobatsira kana ikashandiswa zvine mutsindo nevatengesi vane hunyanzvi, asi vatsva vakaita sewe vanoda kushambadza maalcoins asina kugadzikana ne125x yekuwedzera… havazi vanhu vane mutoro. Kana iwe ukaomerera pakutengesa nehuremu, saka unogona kufunga Akaburitswa maTokeni, ayo anokupa zvine mwero zviyero uye kubvisa njodzi yekudzimwa .. saka tsika yakanaka yekutengesa. Tinofanira kutaura nezvazvo futi mangwana.
Isu takaona iyo yekutanga yekutengesa mashandiro paBinance.
Nekudaro iyi ingori yeimwe yeakawanda masevhisi anopiwa pane ino hombe cryptocurrency buffet, saka ngatitarisei zvimwe zviri mumenu.
Nekutenderera uku kwese kwemabhangi matsva kutenderera pasirese, newewo unofarira kuseka mumari yako. Zvakanaka, Binance Gamuchira inokupa iwe mukana wekuwana chimbadzo chemitero yekutenderedza 6% APY (Yegore yepesenti goho) pane imwe crypto mari.
Binance Gamuchira - Flexible Mitemo
Iwe unogona kusarudza kusarudza inochinjika, zvinoreva kuti iwe unogona kuwana yako crypto chero nguva, kana iwe unogona kuvharira iyo crypto kwenguva inosvika kumazuva makumi mapfumbamwe kuti uwane mubhadharo wakakwira zvishoma.
Binance Gamuchira - Yakagadziriswa Mitemo
Zvigadzirwa zvekuchengetedza zvine njodzi zvakanyanya zviripo pamitengo yakatokwana, asi ramba uchifunga kuti uri kutora njodzi yakawanda kuti uwane kudzoka kwakawanda.
Binance Gamuchira - Yakakwira Njodzi Zvigadzirwa
Chikonzero izvo zvigadzirwa zvinounza kufarira zvinonyanya kufarirwa ndezvekuti vanhu vazhinji vanochengeta macryptocurrencies muchikwama uye vagere ipapo vasina zvavanoita. Panzvimbo iyoyo, vamwe vanhu vanotora chikamu chezvavanobata kuti vawane mubereko pavanomirira mitengo yemakristptocurrency ichiputika vorova mutengo wavanoda.
Chimwe chigadzirwa chinopisa icho Binance inopa yavo crypto vhiza kadhi.
Binance Visa Crypto Debit Kadhi
Asi nei iwe ungazomboda kuve neyako?
Ngatizvitarisei izvi, kushandura macrypto mari uye kubvisa mari iyoyo kubva kubhangi rako kunogona kunetsa. Zvakare, zvakanaka kufunga nezvekuzvipa iwe chimwe chinhu kana chisina kuenda zvakashata .. saka kana iwe uine hanya uye uchida kukwanisa kushandisa yako crypto chero Visa inogamuchirwa, saka kadhi reCrypto ndizvo zvaunoda. Kadhi racho rinowanikwa mune zviuru zvemazana pasi rose. Kadhi rakanaka reBinance dema rakasununguka zvachose, uye Binance pachayo haibhadharise chero mari yekugadzirisa kana yehutariri. Iyo kadhi inobatana zvakare neyako Binance Exchange account! Uye zvakare, unogona kukwira kusvika ku8% yekudzoserwa mari paunoshandisa iro kadhi saka hongu kana iwe uine mukana wekukwanisa kuwana binance kadhi saka ungangoda kubata rimwe izvozvi.
Ini handikurudzire kuti iwe uite izvi, asi Binance inopawo yakagadziriswa mari yechikwereti kana uchida.
Nzira yakatwasuka yekuitsanangura ndeyekuti zvakada kufanana nekutora chikwereti pawnshop, kwaunopa chibatiso muchimiro chechinhu chine kukosha (senge wachi) uye uwane mari pachikwereti. PaBinance unogona kuwana yekutanga Loan kune Value (LTV) chikamu che55% uye iwe unozokumbirwa kuti uwedzere mamwe macrypto mari kuchengetedza chikwereti chako kana iyo LTV yakwira kusvika pa75%. Kana iyo LTV ikarova 83%, yako crypto chibvumirano ichatengeswa naBinance kuvhara chikwereti .. iwe zvechokwadi haudi kuti izvo zviitike.
Zvinoitwa nevanhu vazhinji nezvikwereti izvi kutenga mamwe macryptocurrencies inova nzira yekushandisa, asi zvakadaro, kana iwe uchifarira, nechombo ichi unogona kupa mari yakabatana uye kutokwereta mapaundi euros kana madhora ekuUS .. kana uchida.
Zvino pane chimwe chinhu chinozivikanwa seBinance Liquid Swap inova imwe nzira yaunogadzira mari yekungoita nema cryptocurrencies uye unogona kuwana mari yepamusoro. Kunyange zvakadaro chengeta mupfungwa kuti inotakura njodzi!
Binance Liquid Chinja
Chimwe chiitiko chinopihwa naBinance ndiyo Launchpool yayo. Chaizvoizvo chigadzirwa ichi chinobvumira vashandisi veBiannce kugadzira matokeni semubairo mukutsinhana nekumisikidza mamwe ma cryptocurrencies. Mamwe macryptocurrencies senge Litentry haasati ambotengeswa neruzhinji kana Initial Exchange Offering zvachose, uye panzvimbo pezvo vakagovera chikamu chechiratidzo chekutanga vachishandisa Launchpool.
Chigadzirwa chekupedzisira chandinoda kutaura newe nezvacho ndecheBinance Launchpad: ndiyo yega Binance chikuva chekutanga purojekiti ye crypto.
Ndipo zvakare apo vakomana sesu vanogona kupihwa ma tokeni pamitengo, yakanaka kwazvo .. kumabasa anozivikanwa paLaunchpad kugoverwa kwezviratidzo kunoitwa kuburikidza nerotari system - kuzviisa pasi nyore, mari zhinji yeBNB yauinayo muaccount yako .Binance, matikiti erotari mazhinji aunowana. Kana iwe ukahwina rotari, une mvumo yekutenga yakatarwa altcoin yemutengo wakatarwa. Nekudaro, chero iwe ukasarudza chirongwa chakasimba uye uine rombo rakaringana kuti uwane mugove, mikana iwe uchafambiswa zvakanaka nekukurumidza apo kushambadzira kweruzhinji kunotanga kurarama paBinance. Ichi ndicho chikonzero anenge mapurojekiti ese akatangwa pane yekumisikidza yakagara ichinyorerwa nevanhu vazhinji, ndosaka iyo lottery system yakaitwa: kwaive kuedza kwe binance kuita kuti migove iyi ive yakanaka uye yakanaka. Izvo zvakare hazvisi sekunge binance inogovera aya ekutanga Shanduro Kupa nezvimwe zvekuchinjana, saka kana iwe ukaona chirongwa pane yekutanga pad iyo mukana unenge uri wega kuna Binance. Izvo zvakakodzera kubhururuka pamusoro peiyo yekutanga pad kuti uone kana paine chinhu chinoseka ...
Tave kutopedza. Kungori mamwe mazwi mashoma ekutaura nezve zvimwe zvedzidzo zviwanikwa zvinopihwa maBinance mahara.
Yokutanga ndeyeBinance Academy, iyo inopa zvimwe zvinonakidza zviwanikwa pane akasiyana madhijitari uye misoro inoenderana nekrispto. Yechipiri chinhu chakanyanyo kushushikana: chiri Binance Research. Pano iwe unogona kuwana zviwanikwa zvine chekuita nemapurojekiti ane ese marudzi ehuwandu uye magirafu, ayo anotarisana nekunyora kugoverwa kwematokeni epurojekiti yakapihwa, iyo kugovera chiratidzo ndiko kugovera kwavo, kugovera kuburitsa purogiramu uye nezvimwe zvakawanda. Tarisa, zviri nyore kwazvo kuverenga.
Iyo inotungamira yapfuura ... asi chokwadi ndechekuti ini ndichangobva kukwenya pamusoro uye kuti Binance inopa zvakanyanya kupfuura zvainogona kutaura muchinyorwa chimwe.
Kana iwe uchifarira kutanga paBinance, usakanganwe iyo yakasarudzika 20% yekutengesa mubhadharo mutero nekusaina kusaina mahara kuburikidza nereferal link.
4.3 kubva pa5 nyeredzi(1271)
3,80 € (kubvira 01/07/2022 18:42 GMT +00: 00 - Rumwe ruzivoUye vari pasi pekuchinja. Nyaya ipi zvayo panyaya iyi inowanika pa Amazon.com, sezvinoshanda panguva yekutenga.)
Nyaya inoteveraMaitiro ekupa kurima neLiquid Swap pane Binance